Vaovao - Inona avy ireo fiasan'ny flangean'ny fiara sy ny gasket hub?
Inona avy ireo fiasan'ny flanges fiara novaina sy gasket hub?
1. Tsara tarehy, na ny kodiarana tany am-boalohany na ny kodiarana novaina, noho ny antony hafahafa isan-karazany, ny kodiarana sy ny kodiarana dia tsy mifanandrify amin'ny volon'ny fiara mihitsy. Ny fampifanarahana eto dia midika fa ny haben'ny kodiarana dia mihoatra ny latsaka, miankina amin'ny fender ny fiara mihitsy. Ho an'ny fender, ny haben'ny kodiarana dia lehibe loatra anatiny na ivelany, ka miteraka ny fandrindrana ny fiara amin'ny ankapobeny.
2. Fampisehoana, ny zava-bita voalaza eto dia mifantoka amin'ny fahamarinan-toerana ny fiara sy ny fanatsarana ny kodiaran'ny fiara. Raha ny marina, miaraka amin'ny fitomboan'ny làlam-pifandraisana, manana fanatsarana fitoniana tsara ho an'ny hafainganam-pandehan'ny fiara sy ny fiorenany. Ankoatr'izay, ho an'ny mpamily dia hahatsapa ho tsara kokoa ny toeran'ny kodiarana sy ny kodiaran'ny fiara.
3. Noterena, noho ny habaky ny kodiarana midadasika kokoa, ny et soatoavina dia mbola tsy voaisa tsara. Aorian'ny fametrahana ny kodiarana kodiarana amin'ny fiara dia hikorontana ny kodiarana anatiny ny kodiarana anatiny, noho izany dia ilaina ny manampy spacers ary mamindra ny hub mankany ivelany. Ahitohy kely izy io mba hialana amin'ny fikororohana ny lamba anaty. Tsy ampy ihany koa ny elanelana misy eo anelanelan'ny haben'ny kodiarana sy ilay caliper lehibe noho ny fanoloana ny freins be loatra, ka ny foiben-kodia dia tsy maintsy velarina ivelany kokoa.
Raha ny marina, araka ny fikasana tany am-boalohany ny famolavolana fiara, ireo kojakoja fanampiny toy izany dia amin'ny antony tsy mitombina sy mampidi-doza.
Inona no atahorana ho an'ny fiara aorian'ny fampidirana gazy na flanges?
1. Very fiononana. Aorian'ny fampidirana gasket na flanges, ny familiana isan'andro ny fiara mihitsy dia mety hiteraka fatiantoka iray, indrindra amin'ny toe-javatra ratsy. Amin'ny toe-javatra manokana manokana dia mety hiteraka fahasimbana amin'ny fiarahan'ny semi-axe-n'ny fiara izany.
2. Ny fikororohana ny vatana koa dia noho ny antony maro. Amin'ny tranga sasany, ny fampidirana gasket na flanges dia mety hihozongozona vatana ihany koa rehefa mitondra fiara ny fiara, saingy tsy fahita izany toe-javatra izany.
3. Akanjo kodiarana. Aorian'ny fampitomboana ny làlambe, mampitombo ihany koa ny volan'ny unsprung, izay mety hisy fiatraikany kely amin'ny zoro fironana. Mety misy ny fiatraikany amin'ny fitafian'ny kodiarana, toy ny fitafiana tsy mitovy amin'ny akanjo anatiny amin'ny kodiarana. , Tsy dia avo ny mety hisian'ireo toe-javatra ireo.
4. ny vokatry ny freins dia atena mavitrika. Vitsy ny mpitaingina ihany koa no nahita fa rehefa avy nanisy gazy na flanges dia tsy dia tsara toy ny teo aloha ny frein-fiara. Amin'ity toe-javatra ity dia miova ny ankamaroan'ny zoro fironana, ka miteraka fihenan'ny faritra misy ny kodiarana ary tsy dia tsara toa ny taloha intsony ny freins. Ho fanampin'izany, dia ny vokatry ny saina amin'ny mpitaingin-tsoavaly, izay mahatsapa mandrakariva fa hisy olana isan-karazany hipoitra aorian'ny fampidirana na fanoloana kojakoja sasany.
5. Miova ny rafitra fampiatoana, noho ny fitomboan'ny wheelbase, ny volan'ny unsprung, ary ny fiovana sasany, sns., Masoivoho fanovana vahiny tena tsara, aorian'ny fampidirana gasket na flanges amin'ny hub, dia hikendry ny fiara Ny rafitra fampiatoana manontolo an'ny orinasa dia nasiam-panovana indray hahatratrarana ny toetran'ny fiara.